Arle Uein na-ekwu,
September 3, 2010 na 12:03 obi
M nwere a ọhụrụ ahụhụ na ọhụrụ ntọhapụ (0.6.3) na plugin Mailpress. Mgbe anyị chọrọ iji gosipụta otu n'ime nsụgharị nke na peeji nke, e nwere onye na njehie :
Ịdọ aka ná ntị: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: Unregistered njehie ozi kwadoro, akara: 4 na /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php na akara 7
Ịdọ aka ná ntị: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: PCDATA ghara ịdị irè Ịsaka uru 1 na kwadoro, akara: 4 na /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php na akara 7
Ịdọ aka ná ntị: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: PCDATA ghara ịdị irè Ịsaka uru 3 na kwadoro, akara: 4 na /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php na akara 7
Ịdọ aka ná ntị: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: usoro ']]>’ adịghị ekwe na ọdịnaya na kwadoro, akara: 4 na /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php na akara 7
Ịdọ aka ná ntị: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: esịtidem errorExtra ọdịnaya na njedebe nke akwụkwọ na kwadoro, akara: 4 na /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php na akara 7
Kearu njehie: Kpọọ ka a so ọrụ hasAttributes() na a na-abụghị ihe na /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php na akara 50
September 6, 2010 na 11:31 obi
M arụnyere na plugin na apụghị ịhụ agha, Echere m na m na-na-efu ihe ebe.
The esemokwu na-kpatara n'ụzọ Transposh eji iwekota n'ime gettext (site na-agbakwụnye na ndị chars na mgbe e mesịrị wepụ ha) ejikari ogu na ị na-akọwa ga-eme eme.
September 13, 2010 na 7:55 obi
Ị nwere ike tinye otu nhọrọ “gbanyụọ gettext mwekota” …
September 13, 2010 na 10:06 obi
Ee, Echere m ga tinye ya na-esote version
Edward Mugits na-ekwu,
September 5, 2010 na 5:45 obi
M hụrụ n'anya ihe i na-ahụ ma na-agụ ebe a, dị nnọọ bụghị nyochawa ike mejuputa. Na-ejikere nwere m kọfị saịtị emelitere-ọhụrụ WP na a nkwụnye maka translation bụ kwesịrị m. mgbe sụgharịa, ọ ga-imelite na ha jupụta page dị ka asị na ọ bụ a pụrụ iche page? Ọ bụrụ na m nwere 20 peeji nke na bekee na sụgharịa Japanese, m ga-enwe ike iji sụgharịa page ike n'ezie page na-azọpụta ya dị ka now a ndụ page ma mee full meta njikarịcha?
M mkpa a website mere na m chọrọ na-amuma usoro a arụmọrụ, onye obula avialable ihota a?
September 6, 2010 na 11:29 obi
The sụgharịa page bụ kpọmkwem page maka ihe ọ bụla bara uru na nzube, Amaghị m ihe ị na-ekwu kpọmkwem site na zuru meta njikarịcha ma m n'ezie atụ anya na ọ na-arụ ọrụ
September 9, 2010 na 11:10 na
(mwute n'ihi na m na bekee)
N'ihi na m na Polish web i ka Polish asụsụ na an-kpọ. Mgbe na-agbanwe agbanwe lang ndị ọzọ, m ga-esi sụgharịa a lang aha wijetị “Translation” na nhọrọ “Nịm dị ka ndabere asụsụ” na “Dezie Translation”
dịka. maka Deutsh > translation, Mee ka ndabere asụsụ
Ma mgbe i na-agbanwe ka Polish (m ndabere lang) a ederede bụ na bekee, bụghị Polish. 🙁
Mere efu wijetị translation maka defalut lang ma ọ bụrụ na ndabere bụ ndị ọzọ karịa bekee?
September 14, 2010 na 10:51 obi
Nke a ga-ofu na-abịa version (0.6.4) anya
September 20, 2010 na 3:04 obi
Ndewo, M nwere nsogbu Norwegian nb_NO. The ọrụ buddypress ego n'anya sụgharịa naanị nke mbụ ọrụ, ndị ọzọ niile na-arụ ọrụ anọgide na bekee…Ọ bụla echiche?
September 20, 2010 na 3:26 obi
M na-na-a oghere page maka ụfọdụ asụsụ…M nwere ike inye gị ohere m onwe obodo ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji chọpụta ihe mere?
September 20, 2010 na 3:38 obi
N'ezie, ọ bụ ndị asụsụ ahụ na-anaghị nwere ihe ọ bụla .mo files. M ga-esi a oghere page…
September 22, 2010 na 11:38 na
Ndewo, na virtual usu nhazi, m web nchịkwa mụbara php_admin_value memory_limit ka 128 na ugbu a, ọ na-arụ ọrụ… Ya mere, ị nri, ọ bụ a ebe nchekwa nsogbu! Thx maka enyemaka gị!
September 24, 2010 na 12:53 na
Obi ụtọ na m bụ ike na-enyere
September 24, 2010 na 8:54 na
Ee, thx ọzọ!
M ka na-esi a nsogbu ezie, mgbe m nwere buddypress asụsụ faịlụ…Na Norwegian ihe atụ, naanị mbụ ọrụ a sụgharịrị, ndị ọzọ abụghị…ihe ọ bụla echiche?